Teritori'i Krasnoyarsk - magazine "Potato System"
Tena Label Faritanin'i Krasnoyarsk
Label: Faritanin'i Krasnoyarsk
Tamin'ity taona ity, manana olana isan-karazany amin'ny ovy ny faritra: ny voangory ovy Colorado any an-tokotany manokana sy zaridaina legioma (maro ny bibikely ...
Ny kaoperativa fambolena "Fampandrosoana an'i Krasnoyarsk" tamin'ny tapaky ny volana aogositra 2021 dia nametraka ilay mpanangom-bokatra sivana 2-laharana irery ao amin'ny Faritany Krasnoyarsk. ...
Tamin'ny 2021, ny sampan'ny Ivotoeram-panjakana Federalary Budgetary "Rosselkhoztsentr" ao amin'ny Teras Krasnoyarsk dia namoaka SPH "Dary Malinovki" LLC - iray amin'ireo mpamokatra masomboly lehibe ...
Fantatra ireo karazana ovy malaza indrindra any amin'ny Faritanin'i Krasnoyarsk
Ho an'ny fijinjana taona 2021, ovy 11,1 taonina no nambolena tao amin'ny Faritr'i Krasnoyarsk, izay 49% no orinasa mpamboly, ary 51% ...
Niorina tamin'ny taona 2013 i Agroholding "Dary Malinovki", ny tena famokarana ovy voa, ny fambolena sy ny fanodinana ovy sy legioma ...
Ao amin'ny Faritany Krasnoyarsk 5,6 hekitara hektara ho an'ny fambolena ovy
Ny agrarians an'ny Teras Krasnoyarsk dia nanomboka ny fampielezana ny varotra. Ankehitriny, ahidrano, orza, ahitra fanao isan-taona ary maharitra dia mamafy any Uzhursky, Novosyolovsky, Shushenskoye ary Idrinsky ...
Ny fihazonana ny fambolena "Dary Malinovki" dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana indostrialy lehibe indrindra any Siberia
Fampirantiana "Siberian Dacha" izay natao tao Krasnoyarsk. Orinasa manolotra akora voa, zana-ketsa ...
Krasnoyarsk fambolena "Dary Malinovki" lasa mpikambana ao amin'ny tetikasa nasionaly "famokarana ny asa sy ny fanohanana ny asa"
Ny fihazonana ny fambolena Dary Malinovki dia nanjary mpandray anjara tamin'ny tetik'asa nasionalin'ny famokarana ny asa sy ny fanohanana ny asa any amin'ny Faritany Krasnoyarsk. Ao anatin'ny telo taona ho avy, homena ny orinasa ...
Nitsidika ny fambolena "Dary Malinovki" ny governoran'ny Faritany Krasnoyarsk
Nandeha nanao dia nankany amin'ny distrikan'i Sukhobuzimsky ny governora Alexander Uss, ary nojereny ny fizotry ny fijinjana ovy. Ao anatin'izany ...
Hanao seminera ny orinasa SOVZOND
Fijinjana legioma vita any amin'ny faritra Volgograd